Bournemouth oo garoonka Stamford Bridge ku ciqaabtay Chelsea +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Bournemouth oo garoonka Stamford Bridge ku ciqaabtay Chelsea +SAWIRRO
Bournemouth ayaa si fiican u xasuuqday Chelsea oo ku sugan garoonk Stamford Bridge, waxeyna aheyd markii ugu horeysay tan iyo 2015 ay kooxda Blues guuldaro kala kulanto dhigeeda Bournemouth kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Qeybtii hore kulanka waxey kusoo dhamaatay barbaro gool la’aan ah, balse qeybtii labaad ayey wiilasha Eddie Howe ciqaabeen dhigooda Antonio Conte oo waliba ku sugan gurigooda ku yaala galbeedka London.
Callum Wilson ayaa dhaliyay goolka ugu horeeya kulanka kaas oo caawinaad ka helay Jordan Ibe, si fudud ayuuna xidigaan u dhameystiray kubadda.
Goolka labaad ee Blues lagu ciqaabay waxaa dhaliyay Junior Stanislas kaas oo isna caawinaad ka helay Callum Wilson, halka goolka sadexaad uu dhaliyay Nathan Ake oo horay ugu soo ciyaaray Blues.
Chelsea waxey heysatay fursad ay ugu yaraan dhanka dhibcaha barbaro kula noqoto Man United, balse ma dhicin, waxeyna haatan fadhisaa booska 4-aad ee horyaalka iyadoo farqiga goolasha kaga hooseysa Liverpool.